Deeqda waxbarasho ee Caafimaadka ee ugu Fiican Ardayda Afrikaanka ah ee Wax ku Barata Dibadda 2022
Deeqda waxbarasho ee ugufiican ee ardayda Afrikaanka ah ee Dibadda wax ku barta
Kani waa liistada Deeqaha Caafimaadka ee ugu Fiican Ardayda Afrikaanka ah ee wax ku barta dibadda lacag la’aan. Deeqaha waxbarasho ayaa si buuxda loo maalgeliyaa waxayna u baahan yihiin waxyaabo yar oo ka mid ah codsadayaasha u qalma.
Jaamacadda St. Jaamacadda Jaamicadda Caalamiga ah ee Deeqaha Caafimaadka 2018 / 2019
Jaamacadda St. George waxay ku faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo helitaanka Jaamacadda St. George ee Deeqaha Caafimaadka Caalamiga ah 2018/2019, dadka u-qalma ayaa lagu soo dhaweynayaa inay codsadaan.
Biomedical Sciences Shahaadada Deeqda Ardayda Caalamiga ah, 2018
dalabyada ayaa loogu talagalay Deeqaha Sayniska Biyomediga - Zhejiang ee Jaamacadda Zhejiang-Jaamacadda Edinburgh Institute ee Haining, Shiinaha.
Jaamacadda Caalamiga ah ee Deeqda Waxbarashada Ardayda Dibadda ee Malaysia, 2018
Codsiyada ayaa lagu martiqaadayaa deeqo waxbarasho oo cusub oo caalami ah oo loogu talagalay ardayda caalamiga ah. Deeq waxbarasho ayaa loo heli karaa in lagu sii wado Jaamacada Pre-University iyo barnaamijyada shahaadada koowaad ee sanad dugsiyeedka 2017-2018.
waxbarasho Dubai: Kulliyadaha Caafimaadka ee ugu sareeya Dubai ee loogu talagalay Ardayda Caafimaadka ee Caafimaadka (eeg barnaamijyada la heli karo)
Si loo soo jiito arday badan oo caalami ah loona dhiiri geliyo cilmi baaris tayo leh, Imaaraadku wuxuu maalgashi xoog leh ku sameynayaa nidaamkiisa waxbarasho. Mid ka mid ah goobaha waxbarashada ee dalku sida gaarka ah diiradda u saarayo ayaa ah barashada caafimaadka. Waddanku wuxuu leeyahay dhowr kulliyadood oo caafimaad oo si heer sare ah loo qiimeeyay oo bixiya barnaamijyo caafimaad oo ballaaran oo kaladuwan, oo ay kujiraan shahaadooyin, dibloomaasiyiin, shuraako ama shahaadooyin aasaasi ah iyo sidoo kale bachelor takhasus leh, mastar, iyo shahaadada takhasuska.
Hay'adda MedEvac Foundation International Scholarships 2018
Codsiyada waxaa lagu casuumay Xarunta Caalamiga ah ee 'MedEvac Foundation' ee loogu talagalay carruurta, Sanduuqa deeqaha waxbarasho. Deeqda waxbarasho waxaa loogu talagalay in lagu kafaalo qaado ardaydaas ka diiwaangashan ama laga aqbalay kulliyad la aqoonsan yahay, jaamacad ama dugsi farsamo-xirfadeed.
Dibedda Ku Baro Iyada oo Deeq waxbarasho la siinayo
Previous Post:Deeq waxbarasho oo bilaash ah oo loogu talagalay Nigerian gudaha Australia
Post Next:Waa maxay deeqda waxbarasho ee ugufiican ee la codsado? Hubi Halkan